फोहर व्यवस्थापनमा समस्या - Goraksha Online
फोहर व्यवस्थापनमा समस्या
दाङ, २२ माघ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा घोराही उपमहानगरपालिकाले तेरौटमा गल्ने र नगल्ने फोहर बिसर्जनको अभ्यास गरेको थियो । तेरौटेको डम्पिङ साइटमा त्यतिबेलै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि फोहरलाई मोहर बनाउने अभियान शुरु भएको थियो । तात्कालीन कार्यकारी प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले गोरक्ष कार्यालयमै आएर स्थलगत अनुगमनमा जान अनुरोध गरेका थिए । अवस्था त्यस्तै देखिएको थियो, अब फोहरलाई मोहर बनाउन त्यसबेलाको घोराही नगरपालिका लागिपरिसकेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हालको तुलसीपुर–१३ फुलवारीमा स्थायी डम्पिङ साइटको परिकल्पना गर्दै पौने करोडको जग्गा खरिद ग¥यो तर सो जग्गा अझै पनि प्रयोगविहीन भएको छ । पौने करोडको लगानी अहिले के भइरहेको छ भन्ने विषयमा नगरबासीहरुले नियालिरहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मुटु बिपीचोकमा गल्ने र नगल्ने फोहर फाल्ने बाल्टिनहरु अहिले पनि देख्न सकिन्छ तर नगरपालिकाको फोहर उठाउने गाडीले ती दुबै बाल्टिनका फोहरलाई एउटै कम्पे्रसर भ्यानमा राखेर पातुखोलामा लगेर डम्पिङ गर्दै आएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि फोहर व्यवस्थापनका लागि धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले प्रस्ताव पेश गरे । पटक–पटक छलफल पनि भए तर खासमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि फोहरलाई मोहर बनाउने अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । नगल्ने फोहरलाई पुनः प्रशोधनको अभ्यास शुरु हुनै सकेको छैन ।
त्यसैगरी अघिल्ला दुई सातादेखि लमही उपमहानगरपालिकामा पनि एउटा कन्सल्टेन्सी आएर दिसाजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव ग¥यो । नगरपालिकासँग सम्झौता पनि भयो, तर काम भने सम्झौता भएअनुसार हुन सकिरहेको छैन । ठूला–ठूला योजना सुनाउने तर काम हुन भने सकेका छैनन् । दाङको लमही नगरपालिकाले दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन परियोजना शुरु गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाले पहिले छनोट गरेको जग्गामा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले नयाँ स्थानमा जग्गा खोजी गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पहिले नगरपालिकाले वडा नं. ५ मा दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाइएकोे थियो । तर उक्त स्थान वन क्षेत्र पर्ने भएकाले नयाँ स्थानमा खोजी गरिएको परियोजनाका फोकल पर्सन गायत्रीकुमारी थापाले जानकारी दिइन् । अहिले नगरपालिकाले वडा नं. ३ मा जग्गा छनोट गरेको उनको भनाइ रहेको छ । अहिले वडा नं. ३ मा रहेको ऐलानी जग्गा छनोट गरिएको उनले बताइन् । ‘नयाँ स्थानमा जग्गाको खोजी गर्नु परेकाले काममा ढिला भएको हो’, उनले भनिन् ।
त्यसैगरेर कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म लकडाउनको कारणले पनि यस कार्यमा थप ढिला हुन पुगेको उनको भनाइ रहेको छ । जग्गाको बारेमा टुंगो लागेपछि ठेक्का आह्वान गरिने भएको छ । फागुन महिनासम्ममा ठेक्का आह्वान गरिने बताइएको छ । त्यसपछि कामले गति लिनेसमेत नगरपालिकाको अपेक्षा रहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघको सहकार्यमा यस प्रकारको परियोजना शुरु गर्न थालिएको हो । यसका लागि लमही नगरपालिका र नेपाल नगरपालिका संघबीच २०७५ पुस १० मा सम्झौता भएको थियो । नगरपालिका संघको सहकार्यमा देशभरका ५ वटा नगपालिकामा यस प्रकारको परियोजना शुरु गरिएको हो । नेपाल नगरपालिका संघको सहकार्यमा नगरमा शहरी सरसफाईसम्बन्धी कार्य नमूना परीक्षणको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । लमही नगरपालिका, लहान नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, वालिन नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिकामा यस प्रकारको परियोजना शुरु गरिएको हो ।
भौतिक निर्माणको काम केही समयपछि शुरु हुने फोकल पर्सन थापाको भनाइ रहेको छ । भौतिक निर्माणका लागि २ करोड रकम खर्च लाग्ने फोकल पर्सन थापाले बताइन् । यसका लागि लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बजेट विनियोजन गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । डिपिआर निर्माण तथा पोलिसी निर्माणमा नेपाल नगरपालिका संघले सहयोग गरेको र भौतिक निर्माण नगरपालिकाले आफै गर्नुपर्ने छ । ‘नगरपालिका संघले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ भौतिक संरचना निर्माण लमही नगरपालिकाले नै गर्नेछ’, थापाले भनिन्– ‘निर्माण सुरु भएको करिब ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने भएको छ । परियोजनाले दिसाजन्य लेदो व्यवस्था गर्ने काम गरिने थापाको भनाइ रहेको छ । यस प्रकारको परियोजना शुरु भएपछि शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीबाट निकालेर बाहिर फालिने फोहरलाई व्यवस्थापन गर्ने सहज हुने भएको छ । यसले वातावरण सफा राख्नसमेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यसका लागि प्लान्ट निर्माण गरेर त्यसमा सेफ्टी ट्यांकीबाट निकालिएको फोहर राखेर त्यसलाई ठोसमा परिणत गरिने छ ।
जसलाई कम्पोष्ट मल बनाएर बिक्रीसमेत गरिने उनले बताइन् । ‘जसले आम्दानीको स्रोतसमेत बन्ने छ’, थापाले भनिन् । यस परियोजना शुरु भएमा फोहर व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अहिले हरेक स्थानीय तहहरुले फोहर व्यवस्थानमा धेरै समस्या भोग्दै आएका छन्’, फोर्कल पर्सन थापाले भनिन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएकाले पनि लमहीमा फोहर व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ । अहिले घर–घरबाट शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीबाट ल्याइएको दिसाजन्य फोहर ल्यानफिल साइडमा व्यवस्थापन गरिने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको बताएको छ । प्रस्ताव स्वीकार गर्ने, डिपिआरका लागि बजेटसमेत खर्च गर्ने तर फोहर व्यवस्थापनका सवालमा लक्षित कार्यक्रम शुरु हुन नसक्दा पछिल्लो समयमा दाङ जिल्लामै फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको चुनौती देखिन थालेको नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ । उनीहरुले यसमा गम्भीर बन्न स्थानीय पालिकाहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
सरिता व्युटीपार्लरको उद्घाटन